लगातार घटबढ हुँदै गरेको सुनको मूल्य आज पनि सोच्नै नसक्ने गरि एक्कासी ह्वात्तै घट्यो ! कति ? हेर्नुहोस् – live 60media
काठमाडौँ – बुधबार सुनको मूल्य घटेको छ। सोमबारको तुलनामा केहि घटेको सुनको मूल्य बुधबार घटेको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार सुनको मूल्य तोलामा ८ सयले घटेको छ। नेपाली बजारमा आज छापवाला सुन मूल्य ९४ हजार १ सयमा कारोबार भइरहेको छ।
यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि तोलामा ८ सयले बढेको छ। आज तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।
असोज महिनाको पहिलो हप्ता सुन लगातार सस्तो भएको थियो। त्यस क्रममा सुन साउन महिना यताकै कम विन्दुमा पुगेको थियो। त्यसयता सुनको मूल्य लगातार घटबढ हुँदै आएको छ।
बुधबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आज चाँदी १ हजार १ सय ७५ कायम भएको छ।
अन्य समाचार : पटकपटक बत्ती जाँदा विद्यार्थी हैरान ! काठमाडौँ – कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण अनलाइनबाटै शिक्षा लिइरहेका बालबालिका पटकपटक बत्ती जाँदा हैरान हुने गरेका छन् । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगमा एक हप्तामा चार दिनसम्म दिनभर बत्ती जाँदा पढ्न नपाएको भनी बालबालिकाले गुनासो गरेका छन् । गोकर्णेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको केही भाग हेर्ने गोकर्ण नो लाइटको क्षेत्रमा पटकपटक बत्ती जाने गरेको हो । अनलाइनबाट दैनिक डेढ घण्टासम्म अध्ययन गर्ने गरेकामा विद्युत् आपूर्तिमा अवरोधकै कारण पढाइ छुट्टी समस्या भइरहेको गोकर्णेश्वर–२ स्थित चण्डिकाश्वरी अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ की छात्रा सचिना थापाले दुखेसो पोखिन् ।
विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध आउन थालेपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिका शिक्षा समितिले असोज १६ गतेदेखि भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर पठनपाठन विद्यालयमै शुरु गरेको छ । विद्यालयको बस नचलाउने, विद्यालयमा खाजा, खानाको नबनाउनेलगायत व्यवस्था गरेर विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिएको शिक्षा समिति सदस्य श्रीकृष्ण ज्योतिले राससलाई जानकारी दिनुभयो । अभिभावकले नै सुरक्षितरूपमा विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुर्याउने गरी सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय गरिएको उनले सुनाए । समितिले कोरोनाको महामारीका बेला विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका नै तयार पारेको छ ।
समितिको निर्णयपछि पनि गोकर्णेश्वरका सबै सामुदायिक विद्यालय खुले पनि संस्थागत विद्यालय भने खुलिसकेका छैनन् । प्याब्सन काठमाडौँका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ अनलाइन कक्षा विद्युत् आपूर्ति, इन्टरनेटको कमजोरी, मोबाइल तात्ने समस्या, विद्यार्थीको आँखामा हुने समस्यालगायत कारण प्रभावकारी नभएकाले बिहानैदेखि विद्यार्थीका बीचमा दूरी कायम गरी कक्षा सञ्चालन शुरु भएको बताउनुहुन्छ । एक मेचमा एक जनामात्र विद्यार्थी राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाइ पठनपाठन शुरु भएको विद्या व्यायाम स्कूलको प्रधानाध्यापकसमेत रहेका उनले जानकारी दिए । अनलाइनबाटै शैक्षिकसत्र प्रभावकारी हुने नदेखिएकाले सुरक्षितरूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको प्याब्सनको विश्लेषण छ ।
← ५० लाखको सम्पति लिएर श्रीमती अर्कै संग फरार ,रोजगारीका लागि खाडी गएका श्रीमानले रुदै गरे सबै संग यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित)
गाडी भाडा धेरै लिने ५ जना पक्राउ ! →